Nairobi Oo Cadaadinta Muqdisho Gaarsiisey Meel Sare Iyo Villa Somalia Oo Aamusan – Goobjoog News
Dalka Kenya ayaa 4-tii bil ee ugu dambeysay waxaa uu kor u qaadey cadaadiska uu ku hayo Soomaaliya, siyaasad iyo ganacsiba.
Sida ay Goobjoog News u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan shirkadda xawaaladda ee Taaj waxaa xiran xafiiskoodii Nairobi, waxaana baarid lagu wadaa iyaga iyo qaar kale oo halkaasi xarumo ku lahaa.
Cadaadiskaas dhanka xawaaladaha waxaa uu qeyb ka yahay mid soo socdey muddo dhowr bil ah, taas oo la doonayo in Soomaaliya ay ugu dambeyntii xal wada hadal ah ka gasho muranka badda ee kala dhaxeeya dalka Kenya.
Soomaaliya ayaa marar badan iska diiday dalab uga yimid Kenya oo ah in wada hadal laga galo dacwada badda ee hortaallo maxkamadda cadliga taas oo go’aankeeda la filayo in la gaaro inta lagu jiro 2019-ka.
May 9, ee sanadkan Kenya ayaa joojisay diyaaradihii toos u tagi jiray Nairobi, iyada oo loo wareejiyey garoonka diyaaradaha ee Wajir, Kenya arrinkaas waxaa ay ku sheegtay sababo amni.
March isla sanadkan Kenya ayaa soo ceyrisay safiirka Soomaaliya ee dalkaasi Maxamud Tarsan, una yeeratay safiikeeda, arrintaas ayaa timid kadib shirkii shidaalka ee London.
Xiriirka oo xumaadey darted, waxaa arrinta soo dhex galay ra’isul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, wada hadal ay galeen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa ku dhammaadey natiijo la’aan.
Goobjoog News ayaa xiriirro badan la sameysay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, laakin waa ka gaabsadeen iney ka hadlaan.
Shirkad Laga Leeyahay Dalka Turkiga Oo Lagu Wareejiyay Tayo Dhowrka Badeecooyinka Dalka Yimaada
Dhageyso: Lafta-gareen Oo Sheegay In Xasilooni Siyaasadeed Gaarsiinayaan Deegaannada K/galbeed
Xildhibaan Geelle: Doorashada Galmudug Waxay Dhacaysaa 28-ka Bishan
Lhfcrk isncft Real viagra generic cialis online
Vxbkdg ontzqm cialis usa cialis daily cost
Sfmpnm vbvybn online canadian pharmacy canadian pharmacy
Guddiga Baarayey Arrinta Qalbi-dhagax Oo Sabtida Soo Socota Warbixintooda Laga Dhageysan-doono
Frrcvl feegth pharmacy online Cxxrd...
Mugnsj jwzsvz canadian pharmacy Qhvte...
Kfmeni rkaszr rx pharmacy Yjssk...
Gllayn ogupxp online canadian pharmacy Yoruq...
Lwdzye mtgutt online canadian pharmacy Knnjp...